जब आर्मेनियामा अनलाइन जुवाको कुरा आउँछ, यस प्रकारको सबैभन्दा लोकप्रिय क्यासिनो स्थल २०१ ven मा फिर्ता देखा पर्‍यो। यो वास्तवमै पहिलो आर्मेनियाली अनलाईन क्यासिनोहरू मध्ये एक थियो जुन देशका बासिन्दालाई लाइभ डिलर गेमहरू प्रदान गर्दछ। अर्मेनियाली खेलाडीहरूले पनि आफ्नो मनपर्ने अनलाइन क्यासिनो खेल अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन क्यासिनोमा अन्य ठाउँहरूबाट अपरेट गर्न खेल्छन्।
सत्य यो हो कि अनलाइन क्यासिनो जुवा अर्मेनियाली बासिन्दाहरूको बीच अत्यन्त लोकप्रिय फुर्सद समय गतिविधि हो। त्यसकारण यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि अधिक भन्दा बढी आर्मेनियाली अनलाईन क्यासिनोहरूले आफ्नो ढोका जनतामा खोल्न थाले विशेष गरी हालसालै। आर्मेनियामा शाब्दिक सयौं अनलाइन क्यासिनो विक्रेताहरू कार्यरत छन्, नयाँ खेलाडीहरू उनीहरूसँग सामेल हुन पर्खिरहेका छन्।
विकल्पहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो भएकोले, सही स्थान पत्ता लगाउन यो केही चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तसर्थ, हाम्रो शीर्ष-रेटेड अर्मेनियाली अनलाइन क्यासिनोहरू मिलेर बनेको सूचीले खेलाडीहरूलाई मद्दत गर्दछ र तिनीहरूलाई गलत क्यासिनोमा सम्मिलित हुन गल्ती गर्नबाट बचाउँछ। हाम्रो सूचीमा केवल पूर्ण विनियमित, पूर्ण इजाजतपत्र प्राप्त अनलाइन क्यासिनोहरू समावेश गर्दछ जुन उनीहरूका खेलाडीहरूलाई ठीक व्यवहार गर्दछ।
शीर्ष १० अर्मेनियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० आर्मीनियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
आर्मेनियामा अनलाइन जुवा वातावरण विशेष रूपले atypical हो, र हाल संसारमा कुनै अन्य देश त्यस्तो अवस्था संग चलिरहेको हुन सक्छ। त्यहाँ कुनै लाइसेन्स प्रक्रिया उपलब्ध छैन, र अर्मेनियाली खेलाडीहरूको लागि अन्य देशहरूमा इजाजतपत्र प्राप्त साइटहरूसँग यो खेल अवैध छ। यद्यपि जुनसुकै तहमा पनि यो प्रतिबन्धको लागि कुनै कार्यान्वयन संयन्त्र छैन, र यो तथ्यले अझ गाह्रो बनाएको छ कि आर्मेनियामा भूमिमा आधारित क्यासिनोहरू र सट्टेबाजी गर्ने कम्पनीहरूले उनीहरूको आफ्नै इन्टरनेट जुवा साइटहरू प्रस्ताव गर्छन् जुन अन्य देशहरूमा लाइसेन्स प्राप्त छ।
यदि यो पर्याप्त अनौंठो थिएन, यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ कि मोबाइल जुवा बढ्दो छ किनकि यो त्यस्तो देश हो जहाँ दुई तिहाइ भन्दा बढी वयस्कसँग स्मार्टफोन, ट्याबलेट वा अन्य मोबाइल उपकरणहरू छन्। यी लाइनहरूमा, यस देशमा के भइरहेको छ भनेर सीधा बनाउन केही गम्भीर सुधारहरू आवश्यक छ किनकि कानूनहरू र व्यवहारमा के भइरहेको छ सम्भावनाको स्पेक्ट्रमको बिल्कुल विपरीत दिशामा।
केही कारणका लागि, आर्मेनियाले अनलाइन जुवा उद्योग इजाजतपत्रमा कुनै चासो देखाएनन्। यो एकदम अनौंठो छ किनकि माग र रुचि पहिले नै त्यहाँ छ र भूमिमा आधारित कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दैछन् जुन देशमा इजाजतपत्र छन्। त्यहाँ कुनै तरिका थाहा छैन यदि तिनीहरूले कुनै पनि समय चाँडै इन्टरनेट जुवा उद्योग इजाजतपत्र लिन जाँदैछन्, तर यदि तिनीहरूले त्यसो गरे भने, त्यसो सम्भवतः उस्तै प्रकारको दिशानिर्देशहरू तिनीहरूको भूमि-आधारित उद्योगको रूपमा अनुसरण गर्नेछौं। यसको मतलब यो हो कि यी इजाजतपत्रहरू सार्थक अर्थपूर्ण हुनेछन् र साइटहरूलाई कडा दिशानिर्देशहरूको पालना गर्नेछ जसले खेलहरू सुरक्षित र वैध राख्दछ।
यो प्रत्यक्ष रूपमा अवैध गैर-संचालित अनलाइन जुवा साइटहरूको साथ कार्यमा खेलाडीहरूको लागि अवैध हो। यद्यपि यस कानूनको कुनै पनि प्रकार, आकार वा फारममा कार्यान्वयन भएको छैन। जब इन्टरनेटमा जुवा खेल्ने कुरा आउँछन् उनीहरूले खेलाडीहरू (वा त्यस चीजको लागि कम्पनीहरू) पछ्याउने कुनै चासो देखाएनन्। यो भनिएपछि, त्यहाँ खेलाडीहरूको लागि पनि कुनै सुरक्षा छैन, त्यसैले यो सल्लाह दिइन्छ कि आर्मेनियाबाट कार्यमा भाग लिने खेलाडीहरूले साइटहरूमा लगिनु पर्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको ख्याल राख्ने राम्रो प्रतिष्ठा हो।
के तपाइँ आर्मेनियाका निवासी हुनुहुन्छ अनलाइन जुवा र यो गर्नको लागि सब भन्दा राम्रा ठाउँहरूको बारेमा सिक्न? यदि त्यसो हो भने, त्यसो भए तपाईं सही ठाउँमा आउनुभयो। हामीले यस गाईड निर्माण गरेका छौं जुन शीर्ष आर्मेनिया जुवा साइटहरूका लागि हाम्रो सुझावहरू साथै अन्य मद्दतपूर्ण जानकारीहरू पनि प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई छिटो पुग्न मद्दत गर्दछ।
चीजहरूलाई लात हान्न, हामी तपाईंलाई तल हाम्रो शीर्ष पिकहरूको सूची प्रदान गर्नेछौं। तर हामी यस गाइडमा हामीले प्रस्ताव गर्नु पर्ने सबै चीजहरू जाँच गर्न तपाईं टाढा बस्न चाहानुहुन्छ। तल, तपाईं अर्मेनियाली जुवा कानून, जम्मा विधि, प्राय: सोधिने प्रश्नहरू, र अधिकमा सेक्सनहरू फेला पार्नुहुनेछ। यस पृष्ठको साथ हाम्रो लक्ष्य तपाईंलाई घर कल गर्नको लागि उत्तम आर्मेनिया शर्त साइटहरू पहिचान गर्न मद्दतको लागि हो।
कुनै ढिलाइ नगरी हामी हाम्रो कामको सर्वश्रेष्ठ आरमेनिया जुवा साइटहरूको सूचीको साथ शुरू गर्न चाहन्थ्यौं। हाम्रो टीमले असंख्य घण्टा अनुसन्धान र सबै उपलब्ध विकल्पहरूको विश्लेषणमा बिताएको छ। सबै प्रतिस्पर्धा जाँच गरिसकेपछि, तलका वेबसाइटहरूको सूचीले माथि प्रतिनिधित्व गर्नेहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। यदि तपाईं एक अर्मेनियाली खेलाडी हुनुहुन्छ भने, यी जूवा वेबसाइटहरू हुन् जुन तपाईं शीर्ष अनलाइन जुवा अनुभव ग्यारेन्टी गर्न प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
शीर्ष १० अर्मेनियाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 4, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० अर्मेनियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० आर्मीनियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
4 खेलाडी सुरक्षा
शीर्ष १० अर्मेनियाली अनलाइन ...